Waxaa jira xaalado badan oo ah marka aad tirtirto file ah oo ay nadiifiso ka 'Recycle Bin' ka dibna ay ogaadaan in aad weli u baahan tahay. Xaaladaha noocaas ah, sidoo kale waxaad u baahan tahay si aad dhabar - up of file ama software kabashada xog ah in si fudud u bogsan karaan faylasha aad tirtiray. Software Qaar ka mid ah sidoo kale la iman doorasho ee dib u dhiska faylasha iyo fayl lumay oo badan software sidoo kale soo kaban karto, files lumay ka drives aad dibadda iyo qalabka.
Undelete 360 ​​waa magac aad loo jecel yahay dadka isticmaala software si joogto ah gaar ahaan loogu talagalay dadka si joogto ah u baahan tahay qalab kabashada xogta. Xitaa haddii aadan user joogto ah software sida laakiin aad laga yaabo in ay hubaal wajahay xaalado badan oo ah marka aad ayaa laga yaabaa in si qalad ah la tirtiro qaar ka mid ah files muhiim ah ka your computer. Waa arrin aad u niyad in ay la kulmaan arrimaha ay ka mid ka dibna hawsha humongous of mar kale diyaarinta xogta. Xaaladaha noocaas ah, qalabka soo kabashada xogta sida Undelete 360 ​​yimaadaan in gargaar.
Software Tan waxaa loo sameeyey on nooc oo kala duwan oo isku geynta in si hufan baadhaa oo soo kabanayo files badiyay on your computer. Waxaa u shaqayn karo files iyo sidoo kale fayl in lagu tirtiro si qalad ah, iyada oo fayrusyada ama fashilka software / nidaamka. Ma aha oo kaliya wax ku ool on your computer, laakiin sidoo kale ka shaqeeyaa drives USB, qalabka camera, drives qalinka iyo kaararka xusuusta. Waxaas oo dhan ka dhigaysa Undelete 360 ​​qalab kabashada xogta aad u hirgalin karo dadka isticmaala.
Laakiin qabsado waa in aysan diyaar u ah tirada badan ee dadka isticmaala Mac OS X sida ay lama jaanqaadi la. Sidaa awgeed, Undelete 360 ​​ka shaqeeya oo keliya Windows. Laakiin waxaa jira fursado kala duwan in aanu baadhnay, oo la soo xulay oo u sharaxan isticmaala Mac OS X. Software waxa kale oo ujeeddo isku mid ah iyo in la siiyo xogta soo kabashada sahlan oo hufan. Qaar ka mid ah la iman sifooyinka isku halka qaar ka mid ah cayaaraha xitaa qaababka fiican iyo fursadaha helitaanka. Bal aan fiirino ee ugu sareysa 5 kale oo si Undelete 360 ​​-
Wondershare Data Recovery Tool u Mac waa qalab aad u fudud in dib ila oo dhan files si qalad ah ku waayay sida sawirada, waraaqaha, videos, emails iyo xitaa files xafidayaa. Waxaa soo kaban karto, files lumay ay sabab u tahay qaliin aan habboonayn, tirtirka shil iyo jeermiska fayraska.
Khibrad Custom - Waxaad fursad u isticmaashaa software ah iyada oo ay Wizard ama xulashada Data Recovery Buugga leeyihiin.
Help Feature - feature caawimo ah in uu weheliyo, barnaamijkan waxaa lagu qariyay hoos u soo dejiyey menu in la heli karo icon yar ee geeska gacanta midigta sare ee shaashadda marayo.
2. gaardi digsi
Gaardi Disk kaa caawinaysaa in aad soo kabsado files lumay, sawirada iyo waraaqaha ku saabsan habka iyo sidoo kale drives USB dibadda. Qaar ka mid ah files ma waxay yihiin laakiin gaardi Disk isku dayo in uu dib-u-shuban ama iyaga u dhiska iyo xaaladaha intooda badan waa guul.
Connect iyo Scan - Si ka duwan software dhowr ah, gaardi Disk sidoo kale iskaan karaa ceshan files lumay ka qalab kasta oo aad ku xidhi kartaa nidaamka.
Pay - ugu weyn ee hoos u si software tani waa in ay iskaan karo files badiyay lacag la'aan ah, laakiin si ay u soo kabsadaan aad u baahan tahay si aad u iibsato liisan.
3. xiddig Phoenix Mac Data Recovery
Xiddig Phoenix Mac Data Recovery waa aalad cilmi oo ay ku undelete faylasha lumay ka nidaamka. Waxay ka caawisaa inay soo dhiciyaan files in aad ka soo guurtay oo aad qashinka iyo dooran lahayn.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh - software Tani waxay ku siinaysaa eegis ah oo ka soo kabsaday files musuqmaasuq halkii si toos ah iyaga reloading on si aad nidaamka.
Bixi Xulashada - Waxaad ka heli kartaa Read ah oo keliya - Nuqul ka mid ah software ka bixiya Kulanka Xiisaha Leh oo ka mid ah files soo kabsaday oo kaliya. Si aad u hesho version ka shaqeeya, waxaad u baahan tahay inaad iibsato software ah.
EaseUs Data Recovery software si sahlan u soo kaban karto, files tirtiray in lagu tirtiro midkood si toos ah ama weelna Recycle Bin. Software soo kaban karto, files iyo fayl ka nidaamka (drive gudaha) iyo sidoo kale ka drives dibadda iyo aaladaha isku xira.
Trial Free - Maxkamad ku free in software wuxuu siiyaa waa hab fiican oo in la ogaado haddii software-ka waa waxa aad u baahan tahay iyo in kale. Waxaad heli kartaa ku dhowaad dhammaan astaamaha ku hayso dacwadda iyo in aad iska baarto.
Helitaanka Limited - Waxaa laga yaabaa inaad ka heli qaar ka mid ah qaababka yara xadidan iyo in kastoo aysan inta badan dhimaya hanaanka soo kabashada waxaa mararka qaarkood noqon kartaa wax adag.
5. Mac Free kasta Data Recovery
Mac Free kasta Data Recovery Tool waa ool ah looga caawiyo in aad soo kabsado xogta lumay. Waxaad ka heli 20 dhibcood in ay isku dayaan oo soo kabsado files iyo waxaad u baahan doontaa in la iibsado soo kabsanaya dhaawacyo dheeraad ah ka dib. Dhab ahaantii tani waxay sidoo kale waa hab fiican si ay u tijaabiso software iyo hubi haddii ay la kulanto shuruudaha aad. Waxay leedahay wax badan oo muuqaalada in loo isticmaali karo.
Speed-kabashada - run ahaantii waxaad ka soo kaban karto, faylasha lumay daqiiqo gudahood. Waxa uu baaritaanku iyo file u arko si dhakhso ah oo laga bogsado, iyada oo gumaarka.
La'aanta Help - In kastoo interface ee software-ka waa mid aad u nadiif ah iyo user saaxiibtinimo, ma jiraan gargaar ama taageero qaybaha si aad u helaan haddii aad dhibaatooyin ku soo wajahaan ama gargaar dheeraad ah u baahan tahay. Waxaad u baahan doontaa in ay ku tiirsan yihiin taageerada online.
Waxaa jira kala duwan oo cajiib ah software kabashada xogta iyo qalab aad u isticmaali karto inuu ka soo kabsado aad lumay files, galalka, sawirada iyo videos. Qaar ka mid ah xitaa kaa caawiyo in aad soo kabsado files ka qalab kale oo kasta oo aad ku xidhi kartaa Mac. Qaar badan oo ka mid ah software waxay ka version ah oo lacag la'aan ah ama maxkamad, halka qaar ka mid ah waxay leeyihiin versions bixin oo kaliya in laga iibsan karaa oo ku riyaaqay. Hadaba marka aad lumiso file ah oo ay sabab u tahay sabab kasta, ha ka welwelin. Just isticmaali software ah soo kabashada xogta.
> Resource > bedelan karo > ugu wanaagsan ee 10 kale oo u Undelete Plus on Windows iyo Mac OS X